Xarunta talo siinta Haweenka Macluumaad, Talo iyo taageero haddii ay dhacdo iskaashi iyo rabshadaha qoyska. Waxaan u aragnaa jir ahaan, cilmi nafsi, dhaqaale iyo rabshado galmo in ay qiimo isku mid yihiin.
Ka sokow haweenka ay saameeyeen, asxaabta, ehelkaaga iyo ehelkaaga ee la xiriira haweenka iyo carruurta dhibaataysan ee u baahan macluumaad sidoo kale way nala soo xiriiri karaan, iyo sidoo kale khubaro ka socota hay'adaha kala duwan.
Talobixinta waxaa lagu bixin karaa taleefan - iyadoo aan la ogeyn haddii la doonayo - ama shaqsi ahaan. Shaqaalaha xarunta la-talinta waxaa la heli karaa Isniinta ilaa Khamiista laga bilaabo 8.00 waqti ilaa 17.00 waqti iyo Jimcaha ilaa 14.00 Uhr la heli karo iyo sidoo kale xaaladaha degdegga ah wakhtiyada ka baxsan waqtiga furitaanka iyada oo loo marayo adeegga taleefanka. Ah Lambarka taleefanka waa 0941 – 24000.
Wadatashiyada ayaa dhaca qayb ka mid ah naagta iyo iyada waa bilaash ah, qarsoodi ah oo Furan oo u Dhexeeya macluumaad hal-mar ah iyo kal-Fadhiyada latalinta illaa waqti dheer, wehel Taageero ah.
Haweenka dhibaataysan rabshaduhu waxay go'aan ka gaadhaan nafsadooda mowduucyada lagaga wada tashanayo. Waxaan jeclaan lahayn inaan taageerno haweenka ay saameeyeen sameynta xeelado si ay ula qabsadaan khibradaha rabshadaha iyo horumarinta horumarkooda iyo in la ballaariyo xirfadahooda iyo In la bilaabo fursadaha isbedelka. Ujeeddada ayaa ah iyaga in ay qaabeeyaan nolol maalmeedkooda si madax bannaan.
Talo Macquul ah:
Macluumaadka kala tagga, furitaanka, xanaaneynta
Sharciga Ilaalinta Rabshadaha: Mamnuucida xiriirka iyo u Dhowaanta, Qoondaynta Guryaha ("Ku alla kii garaacaa, wuu baxayaa")
Wadatashiyadu sidoo kale way kula jiri karaan * Turjumaan siday u kala horreeyaan.